China Tube Rectal mveliso kunye nabenzi | Amayeza
Ibhaluni ityhubhu yoxande (i-catheter ye-rectal). Indlela yesiko, kwaye kwimeko yanamhlanje yetekhnoloji ekhuselekileyo, kukusetyenziswa kwe-rectal cath Iityhubhu ezifihlakeleyo zinokusetyenziswa ngokukhuselekileyo nangempumelelo ukunqanda ukungcola kwizigulana ezigulayo ezinesifo sorhudo. Ukusetyenziswa kweetyhubhu ezixutyiweyo njengezithuba zokudibanisa ukuphilisa nokukhusela izilonda zoxinzelelo kwizigulana ezigulayo kufanelekile ukuba kufundwe. Ezi ndawo zihlala ngaphakathi (ama-20 ukuya kuma-30 amaFrentshi) aqhagamshelwe kwisingxobo sokuhambisa amanzi ecaleni kwebhedi,
Ityhubhu ye-PVC ethambileyo kunye nekink, umphezulu ongaphandle ogudileyo, iintlungu ezincinci; Amehlo amabini asemacaleni anemiphetho egudileyo
Iityhubhu eziguqukayo kunye neecatheters zifakwa kwi-rectum yokuhambisa isitulo esivulekileyo kwingxowa yokuqokelela. Ibhaluni kufutshane nencam ye-catheter (ngaphakathi emzimbeni) inokufakwa umoya xa i-catheter ikwindawo yokuthintela ukuvuza kwesitulo ejikeleze i-catheter kunye nokuthintela ityhubhu ekuphumeni ngexesha lokuhamba kwamathumbu.
Ngokwesiko, ityhubhu yoxande ibekwa ngoncedo lwe-sigmoidoscope engqongqo ukufezekisa ukudodobala kwesigmoid volvulus kunye nokunciphisa ukuphindaphinda kwexesha elifutshane. I-sigmoidoscopy eguqukayo inokuba sisixhobo esikhuselekileyo sokufezekisa ukudodobala, kwaye ikwavumela ukubonwa ngokuthe ngqo kwi-mucosa ukuba ikhuphe i-ischaemia.
Ubude Standard 40CM
Isinxibelelanisi esibhalwe ngekhowudi sokuchongwa kwesayizi Ubungakanani (Fr): 22,24,24,26,28,30,32,34,36
Frosted kunye neselubala umphezulu; umbala isinxibelelanisi
Ityhubhu eyi-Rectal yenziwa kwi-Medical grade PVC okanye i-DEHP SIMAHLA ye-PVC, i-PVC engenatyhefu, inqanaba lezonyango
vula isingxobo, ukhuphe ityhubhu yesisu, ngaphandle isinxibelelanisi, qhagamshela nengxowa yomchamo, Fakela ngobunono ityhubhu efakwa kwirektamu (malunga ne-intshi ezi-3 ukuya kwezi-5; sukunyanzela ityhubhu.) Lahla emva kokusetyenziswa kube kanye.
Ukupakisha kwe-PE nganye okanye ukupakisha kweblister
100pcs / ibhokisi 500pcs / ibhokisi
Iimfuno zabaza kuza.
Inkonzo ye-OEM iyafumaneka
Izatifikethi: I-CE ISO ivunyelwe
1. Sukusebenzisa ukuba iphakheji yonakele
Ukusetyenziswa kwexesha elinye, nceda ulahle emva kokusetyenziswa
3. Musa ukugcina elangeni
4. Gcina kude nalapho abantwana bangenakufikelela khona
Ixesha lokusebenza: 5Iminyaka.
Engenazintsholongwane: Oyinyumba ngegesi ye-EO
Egqithileyo Cwangcisa iYankauer
Okulandelayo: Ulwandiso lweTyhubhu
© Copyright - 2010-2020: Onke amalungelo agciniwe. Imveliso eshushu, Imephu yendawo
Ityhubhu yokondla iintsana, Ubungakanani beBlade yoPhando, Iv Catheter, Ukufunxa iCatheter, Ukulungiswa kotywala, Utywala Pad,